शंख बजाउदा हुने अनेक फाइदाहरु यस्त छन् - ज्ञानविज्ञान
हिन्दू धर्ममा शंखको महत्वपूर्ण स्थान छ। शंख राख्दा नकारात्मक उर्जा आउँदैंन र नराम्रो शक्ति टाढा भाग्छ । आयुर्वेदमा शंख निकै लाभदायी मानिन्छ । शंख बजाउनाले मूत्राशय, पेटको तल्लो भाग, छाति र गर्धनको मांसपेशीको स्वतः अभ्यास हुन्छ ।
शंख बजाउनाका फाइदाहरु
१. फोक्सोका लागि फाइदाजनक
२. छाला र हड्डीको हेरचाह
शंख छाला रोगीहरुका लागि पनि निकै फाइदाजनक छ । यो कुरा सुनेर सायद तपाईंलाई अचम्म लाग्यो होला तर यो वास्तविक हो । यसका लागि राती शंखमा पानी भरेर राख्नुहोस् र बिहान उठेर यसको पानीले आफ्नो छालाको मसाज गर्नुहोस् ।
यो पानीले मसाज गर्दा छाला रोग जस्तै एलर्जी, घमौरा, सेतो दागलगायत निको हुन्छन् । शंखमा प्राकृतिक क्याल्सियम, सल्फर र फस्फोरसको भरपुर मात्रा पाइन्छ त्यसकारण शंखमा राखिएको पानीको सेवन गर्दा हड्डी बलियो हुन्छ । र यो दाँतका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ ।
३. आँखाका लागि गुणकारी
आँखाको समस्या जस्तै सुख्खा आँखा, सुन्निने र आँखाको संक्रमण आदि विभिन्न प्रकारको समस्या शंखमार्फत उपचार गर्दा ठिक हुन्छ । यस्तो समस्या देखिए शंखमा राखिएको पानी हातमा लिनुहोस्, त्यसमा आफ्नो आँखा डुबाउनुहोस् र आँखाको नानीलाई केही सेकेन्डसम्म दायाँबायाँ घुमाउनुहोस् ।
साथै, आँखाको ज्योती बढाउनका लागि रातभरी शंखमा राखिएको पानी र साधारण पानी बराबर मात्रामा मिसाउनुहोस् र यसले आँखा धुनुहोस् । यसो गर्दा तपाईंको आँखाको ज्योती बढ्छ ।
४. हृदयघातको सम्भावना कम
५. गुदा र प्रोस्टेटका लागि फाइदाजनक
यो एउटा जिज्ञासा र आश्चर्यको विषय नै हो कि भगवान कृष्णले मानव रुप छोडेपछि के भयो? पाण्डवहरु के भए ? वास्तविक कहानी के हो ? महाभारतको १८ किताब मध्ये १६औँमा मौसल पर्वको बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। यो पर्वको ९ वटा खण्ड छ।
यी कथाहरु ठाँउ र अवस्था अनुसार फरक फरक रहेको छ। तपाइले चाहिँ के सुन्नु भएको छ ?
महाभारतको युद्ध पश्चात भगवान कृष्णले द्वापरयगमा पापीहरूको अन्त्य गरेका थिए । जतीबेला यो पृथ्वीमा पापीहरू धेरै हुन्छन् त्यो बेला भगवान विष्णु कुनै न कुनै रुपमा अवतरीत भएर पापको नास गरेर धर्मको उद्धार गर्छन् भन्ने हिन्दू मान्यता रहेको छ । यसरी महाभारतको युद्ध गराएर भगवान कृष्णले संसारका पापीहरूको त नास गरे तर असङ्ख्यको रुपमा वृद्धी भएको याद्वपकुल देखेर यसलाई पनि नास गराउने उनको इछ्छा थियो ।
महाभारतको युद्धको कारण कृष्ण भएकोले कौरवहरूकी माता गान्धारीले कृष्णलाई जसरी तिमीले कुरुकुलको नास गरायौ त्यसरी तिम्रो कुलको पनि आपसमा लडेर नास हवस् भनेर श्राप दिएकी थिइन् । गान्धीरीको श्रापको प्रभाव र भगवान कृष्णको इछ्छा भएकोले एक दिन याद्वपहरू जंगलमा सिकार गर्न गएको बेला दुर्बाशा ऋषिको आश्रममा पुगे । गान्धारीको श्राप र कृष्णको इछ्छाका कारण धर्मात्मा याद्वपहरूको बुद्धी भ्रष्ट भएको थियो । त्यसैले उनीहरूले दुर्वाशा ऋषीको तपस्याको परिक्षा लिने विचार गरे ।
याद्वपहरूले कृष्णका छोरा शाम्बलाई महिलाको पहिरन गराएर दुर्बाशा ऋषिको अगाडि गएर यी महिला गर्भवती छन् यीनको गर्भबाट छोरा जन्मन्छ की छोरी जन्मिन्छे भनेर सोधे । दुर्बाशा ऋषी स्वभावमा निकै रिशालु थिए । याद्वपहरूले यसरी आफ्नो अपमान गर्न खोजेका थाह पाएर उनले यी महिलाको गर्भबाट याद्वपकुलको नास गर्ने एक मुशल पैदा हुनेछ भने । नभन्दै शाम्बको कपडा खोलेर हेर्दा त्यसबाट एक फलामको मुशल निस्कियो । यो देखेर याद्वपहरू निकै डराएर घर फर्के ।
जंगलमा भएको सबै घटना सुनेपछी कृष्णले मुशल ढुङ्गामा घिसेर त्यसको धुलो समुन्द्रमा फाल्न लगाए । याद्वपहरूले मुशललाई ढुङ्गामा रगड्दै धुलो समुद्रमा बगाउँदै गरे । अन्तमा मुशलको एक टुक्रा धेरै सानो भएकोले त्यो टुक्रा रगड्न कठिन भयो । याद्वपहरूले त्यो टुक्रालाई त्यत्तिकै समुद्रमा बगाए । मुशलको धुलो समुद्रमा बगाएकोले समुद्रको किनारा भरी धारीलो पात भएको झार उम्रियो ।
मुशलको जुन टुक्रा त्यत्तिकै फालिएको थियो त्यो टुक्रा एक माछाले खायो । त्यो माछालाई माझीले समातेर जरा नामको व्याधालाई बेचे । व्याधाले माछा काटेर हेर्दा माछाको पेटमा फलामको टुक्रा देख्यो । त्यो फलामको टुक्रालाई जरा नामको त्यो व्याधाले बाण बनायो । यसै क्रममा एक दिन याद्वपहरूले समुद्रमा स्नान गर्ने र दान गर्ने निर्णय गरे ।
महिला र बालकहरूलाई घरैमा छोडेर सबै याद्वपहरू समुद्र किनारामा जम्मा भए । स्नान दान पछी याद्वपहरूमा कुनै अनर्थको कुरामा विवाद हुन थाल्यो । यसरी विवाद बढ्दै जाँदा उनीहरू आपसमा लड्न थाले । लड्दा लड्दै उनीहरूका हथियार भाँचिए । हथियार नभएकोले उनीहरूले मुशलको धुलोबाट उम्रेको झार उखेल्दै एक अर्कालाई हान्न थाले । जसलाई त्यो झारको चोट लाग्थ्यो त्यो तुरुन्त मर्थ्यो । यसरी आपसमा लडेर सबै याद्वपहरू सिद्धिए । याद्वपकुलको नास भयो भन्ने खुसीले कृष्ण एक पिपलको छायाँमा विश्राम गर्न थाले । जरा नामको व्याधाले टाढैबाट कृष्णको खुट्टा देख्यो ।
व्याधाले मृगको टाउको सोचेर कृष्णको खुट्टामा बाण प्रहार गर्यो । त्यो बाण माछाको पेटमा भेटिएको मुशलको टुक्राबाट बनेको हुनाले कृष्णको मृत्यु त्यसै बाणबाट भयो । यसरी भगवान कृष्णले मानव देह त्याग गरेर चतुर्बाहुको रुप धरेर बसे । जरा व्याधा मृग मर्यो भनेर खुसी हुँदै कृष्णको देह भएको ठाउँमा पुग्यो । त्यहाँ उसले भगवान कृष्णको खुट्टामा आफ्नो बाण लागेको देखेर कृष्णको खुट्टामा परेर माफी माग्यो । यो देखेर कृष्णले जरालाई “म राम हुँदा त बालीपुत्र अङ्गद थिइस् । मैले छल गरेर तेरो बाबुलाई मारेको थिएँ तै पनि तँहिले मलाई रावणसँगको युद्धमा धेरै सघाइस् ।
रावणको मृत्यु पश्चात मैले तँलाई इछ्छा अनुशारको वर माग्न भनेपछी तँहिले बाबाको बध गर्ने तिर भएर लडेको भनेर मलाई लोकले अपहेलना गर्ने छन् । त्यसैले रामको मृत्यु मेरो हातबाट हवस् भनेर वर मागेको थिइस् । त्यो बेला मैले तँलाई म कृष्ण भएको बेलामा मार्नु भनेको थिएँ । त्यै भएर तेरो बाणको प्रहारबाट म मरें यसमा तँलाई कुनै पाप लाग्दैन” भने यसका साथै कृष्ण बैकुण्ठ गएर बसे । महाभारतमा श्रीकृष्ण एक महापुरुषको रुपमा चित्रित गरिएको छ । जसमा उनको मृत्युलाई मुसल पर्वमा बडो सुन्दर रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।
यदुवंशीहरु अहंकारी र श्रीकृष्णलाई नटेर्ने भए पछि उनी दुखी भएर जंगलमा पीपलको वृक्षमुनि सुस्ताइरहेका थिए । जहां एक व्याधाले उनलाई हरिण जस्तो ठानेर झक्किएर हत्या गरिदियो । महाभारतको कथा अनुसार गान्धारीको शाप तथा ऋषि दुर्वासा प्रति स्वयं कृष्णका सबभन्दा प्रिय पुत्रहरुमध्ये एक साम्बले गरेको दुव्र्ययवहार स्वरुप यो घटना भएको हो । यसरी १२० वर्षको उमेरमा श्रीकृष्ण देहान्त भएको थियो ।
Don't Miss it जसलाई धरै पैसा कमाउन मन छ अपनाउँनुहोस् रतन टाटाका यी प्रभावकारी टिप्स
Up Next दम देखि क्यान्सर जस्ता रोगको समाधान गर्ने यो फल चिन्नुभएको छ ? जान्नुहोस् यसका फाईदा